Ubuhle bekinamoni nobusi - i-AFRIKHEPRI FOUNDATION
Ubuhle besinamoni nobusi
By I-AFRIKHEPRI FOUNDATION ngoMeyi 20, 2019
Futhi yebo, kubonakala sengathi inhlanganisela yesinamoni nobusi kuyisimangaliso semiphumela emihle yempilo. Kodwa-ke, akubona abaqeqeshi bezempilo abazoqinisekisa lokhu! Ukuze isifo senhliziyo, inhlanganisela yesinamoni noju kuyoba nenzuzo, ukuthi izokwehlisa izinga lama-cholesterol emithanjeni bese igcina iziguli ezithile ezihlaselwa yinhliziyo. Kunconywa ukuba udle njalo, ekuseni, ingxube yobusi nesinamoni (ukuxuba ukuthola i-paste ukuze ubeke esikhundleni se-jam), ngesinkwa. Lokhu kuzokusiza ukuphefumula kangcono, ukuqinisa ukushaya kwenhliziyo, ukuvuselela imishanguzo kanye nemithanjeni. Ukusetshenziswa kwansuku zonke kwesinamoni noju kungamqinisa isimiso somzimba, futhi uvikele umzimba.
Ngezansi kunezibonelo ezimbalwa zezici ze-sinamoni noju, kodwa lokhu kudla okusetshenziselwa ngokufaneleko akufanele kushintshe imithi enqunywe udokotela wakho.
Ngaphezu kwalokho, ngisho noma izinzuzo zesinamoni noju zingenakuphikwa futhi zingenayo imiphumela emibi kuzo zonke izinhlobo zezifo, ukusetshenziswa ngokweqile kungabangela ukuphazanyiswa.
I nesinamoni engcono kutholakala inqwaba esiqhingi eCeylon (manje Sri Lanka). Umuthi uthela amagobolondo ezimbili, yesibili ibizwa ngokuthi usinamoni, ke kuba grey, kodwa uma sasuswa esihlahleni futhi asha elangeni, kuthatha ukuthi umbala obomvu thina naye ukwazi. Ngaphambili, amaShayina lisasilayisha nesinamoni naseCeylon bese uyiswa Hormuz (esiqhingini Iranian e Gulf), ezinye abathengisi wathola lapho bese uyiswa e-Aleppo (Syria) bese kuba iGrisi ... Abathengisi wayenike lokhu ukukhonkotha igama " NgoCin-a-MOMUM Ngoba la magama amabili asho " izinkuni zaseChina futhi ezizwakala kahle ".
Cinnamon kungokwalabo umndeni umfire futhi kufakazela amagama amaningi afanayo: usinamoni, naseCeylon nesinamoni, ikhasiya, China, inkohliso nesinamoni usinamoni, bastard usinamoni, Padang nesinamoni, usinamoni Saigon, Cochin nesinamoni. amagama lakhe kwezesayensi: Cinnamomum verum (emagama lafanako: zeylanicum), Cinnamomum nekasiya (emagama lafanako: C. aromaticum) nezinye Cinnamomum SPP.
Igama elithi "sinamoni" lavela ngekhulu lesishiyagalolunye. Ivela kuLatin "i-canna", okusho "umhlanga", mhlawumbe okubhekisela ekujuleni kombhobho lapho ibhakede le-sinamoni lithembela njengoba limile. Igama elithi "ikhefu" livele ku-12. Ivela "isi-cassia" yesiLatini, esivela kwisiGreki esithi "kassia", okuye cishe eyayiboleka kubantu baseKhasi abahlala enyakatho yeNdiya kusukela lapho leli cala lithunyelwa khona. Libhekisela kumininoni yaseShayina, evela ezilwaneni C. iCassia.
I-Cinnamon manje isakazeke eNdiya, eMalaysia, eVietnam, e-Indonesia, e-Seychelles, e-Mauritius, e-West Indies, e-Guyana naseBrazil. Izinhlobo eziningana zezihlahla ze-sinamoni zixhashazwa endaweni yangakini ngamagxolo abo, kodwa yiCinon cinnamon (C. verum) neChina (C. cassia) ezifakwa ezimakethe zomhlaba wonke. Lezi zilwane ezimbili ziza ngokulandelana ukusuka eSri Lanka nasezindaweni ezisempumalanga ye-Himalaya, enyakatho ye-India naseVietnam. EYurophu, i-Ceylon cinnamon ikhethwa, kuyilapho eNyakatho Melika imayininoni ikakhulukazi idliwa.
Ngaphezu amagxolo ukuze emakethe yeziqholo, kuyinto amafutha abalulekile ezisetshenziswa kakhulu ukudla okunoshukela kwamakha, izimonyo kanye nemikhiqizo ezithaka imithi, ikakhulu imaski ukunambitheka kwezidakamizwa ezithile.
Izinzuzo isinamoni eziningi: kuba elimnandi, tonic, stomachic (kuyazuzisa esiswini); kuyasivusa esesuthi, ikhuthaza motility emathunjini. Lena condiment, elwa namagciwane, antifungal, futhi nakho abakhuthaza ukufika esikhathini. It is kuboniswe iziyaluyalu wokugaya ukudla (dyspepsia), ukungabi esesuthi, isicanucanu nokuhlanza, amazinyo, abandayo, uhudo, isifo sikashukela (abanye ucwaningo luye lwabonisa ukuthi engayitholi njalo amaphilisi okusekelwe nesinamoni kunomphumela omuhle sikashukela kudingeka, nezifundo ukuqinisekisa noma ukuphika lesi siboniso). Cinnamon nayo kabanzi izimonyo emikhiqizweni ehlukahlukene zamazinyo ukunambitha nomphumela anti-webhaktheriya wasinika umkhiqizo. Cinnamon ubelokhu okwandile eminyaka nengcosana njengoba spice, kungekho side effects ezaziwayo.
Amandla ayo antioxidant akubeka phakathi kokudla okunamandla kakhulu. Ama-antioxidants yizinhlanganisela ezivikela amangqamuzana omzimba kusuka ekulimaleni okubangelwa ama-radicals mahhala. Lezi yi-molecule ezinamandla kakhulu ezibandakanyeka ekuthuthukiseni izifo zenhliziyo, amagciwane anesifo sengculazi nezinye izifo ezihlobene nokuguga.
Ekuqaleni, izimbali kanye nectar yabo
Izinyosi zikhiqiza uju kusuka emthonjeni wezimbali eziqukethwe ezincane zemifino ebizwa ngokuthi ama-nectaries (ngokuvamile avame ngaphansi kwe-corolla); noma kusukela ku-honeydew eqoqwe kuma-aphid.
Umpe uju uketshezi okunoshukela ehlanganisa ngokuyisisekelo ka sucrose ziyoncibilika emanzini at lokuhlushwa obuhlukahlukene phakathi 5 futhi 25%, zigcinwa isivuno lezinyosi. Ngo ukudla, bee kubangela ukwehla okuqukethwe amanzi komkhiqizo eqoqwe, futhi amathe aqukethe i-enzyme (gluco-invertase) kuguqula sucrose ku ezimbili molecule ushukela elula: fructose kanye glucose.
Isivuno is bese sidluliselwe izinyosi eziyizisebenzi esidlekeni: lezi uhla regurgitation ezilandelanayo bee komunye, umphelelisi futhi iguqulwe ngokuphelele. Ayewukhiphe e wax Combs, ukusivumela futhi basakaza ngokuphindaphindiwe, ikhambi ushukela iqukethe ushukela kuphela elula kodwa 50% amanzi. Ukushisa esidlekeni (phakathi 36 futhi 37 ° C) kanye ukupholisa olunikezwa izinyosi kwamaphiko ukunyakaza yokwenziwa kubangele ukuhwamuka kwamanzi kanye okuhlushwa okwengeziwe okuvela: kancane kancane, isixazululo equkethe Akasekho isilinganiso kuka 18% amanzi eduze 80% fructose kanye glucose etholwe, lena uju.
A bee bayatheza cishe 1500 izimbali 2 okusanhlamvu yakhe igcwele kuyo umpe, futhi yena wenza 25 isilinganiso uhambo yansuku zonke mayelana 1 km ngasinye: ezikhathini uju, bee ukuvakashelwa phakathi 3 000 futhi 4 000 izimbali ngosuku; yena uhamba 25 km kuya ukuvuna 0,5 g umpe futhi akhiqize 1 / 10e uju igremu. A ukucabanga elula libonisa ukuthi isidleke is kokuqala ezimbili nxazonke zezwe ukukhiqiza amakhilogramu eyodwa uju oluncane ... ngakho uthi okunethezeka!
Kubalwa ukuthi i-100 g yobusi ilingana nalokho okunesondlo ku:
- amaqanda amahlanu,
- I-0,6 Ibisi lobisi,
- ubhanana abathathu,
- amawolintshi amane,
- 170 g yenkomo,
- 120 g yamantongomane futhi
- 75 g ushizi.
Uju ukulwa ne-super-bacteria
Ososayensi baseBrithani bathole ukuthi uju okhiqizwa izinyosi ezivela emanzini aseManuka eNew Zealand unendawo yokulwa nama-super-bacteria anqanda ama-antibiotic.
Uma sisazi kakade izakhi zokuhlunga izinyosi, kubonakala sengathi siye saqaphela kakhulu ukusebenza kwayo. Abacwaningi e-University of Wales Institute eCardiff, e-UK, bathola ukuthi uju lukaManuka lwakwazi ukubuthakathaka amabhaktheriya enxebeni elithathelwanayo noma ezindaweni ezibhedlela. Kungasiza ekulwa nezilwanyana eziphikisana nemithi elwa namagciwane, into ekhulayo ekhathazayo ngokwengeziwe.
Ku-New Zealand kusuka etizeni ze-Manuka izinyosi ezikhiqiza lolu hlobo lobusi. Eqinisweni, lokhu, okuhlungiwe kanye nokususwa kokungcola kwayo, sekuvele kusetshenzisiwe eminye imikhiqizo yokunakekelwa emhlabeni. Impahla eyayiyisiqalo socwaningo olwethulwa emhlanganweni weNhlangano yeGeneral Microbiology. Ukuze ufunde kabanzi mayelana noju lukaManuka, ososayensi banqume ukuhlola amakhono alo ezinhlotsheni ezimbili zamabhaktheriya: streptococci kanye ne-pseudomonas.
Bese beqaphela ukuthi uju unamandla okwephula ukuzivikela okwenziwa yi-bacterium ngokumelene nesenzo sama-antibiotics. Ngokucacile, kubonakala sengathi into engokwemvelo ivimbela izidalwa ukuba zihlangane ngokuqondile ezindaweni ezivame ukwelashwa. "Lokhu kubonisa ukuthi ama-antibiotic akhona angase aphumelele kakhulu ekubhekaneni nezifo ezingamelana nezidakamizwa uma zisetshenziselwa ukuhlanganiswa noju lukaManuka," kusho uMnu. Rose Cooper, owaqhuba lolu cwaningo. Manje ososayensi banamathele ekutholeni ukuhlanganiswa okusha kwama-antibiotic futhi benza izivivinyo zokwelashwa ukuze bahlole ukusebenza kwazo.
Ezinye izicelo ze-sinamoni-uju
Ukuhlakanipha okudumile kunamanje kugcinwa ulwazi lokuphulukisa izindawo zobusi nesinamoni. Uju nesinamoni zisasetshenziswa njengemithi ezimweni eziningi, ikakhulukazi kubantu, ngenxa yebanga noma imali engenayo, abanokuthola ukunakekelwa kwezempilo okuncishisiwe. Uju lunemvelo yokulwa ne-bacterial. Uju oluchithwa ngamanxeba noma ukushisa luvimbela ukutheleleka futhi lukhuthaza ukuphulukiswa.
Yenza inhlama enezipuni ezintathu uju kanye isipuni sesinamoni powder.
Faka le ngxube kuma-pimples ngaphambi kokulala futhi ugeze ekuseni olulandelayo ngamanzi afudumele. Uma lokwelashwa kwenziwa nsuku zonke amasonto amabili, izibhamu ziqedwa phansi.
Abantu abane-arthritis bangathatha indebe yamanzi ashisayo nsuku zonke, ekuseni nakusihlwa, nezinkezo ezimbili zobuni kanye nesipuni sesipuni sesinamoni.
Kuthathwa njalo, ngisho nesifo samathambo esingapheli singaphulukiswa. Ecwaningweni lwakamuva olwenziwa eNyuvesi yaseCopenhagen, kwatholakala ukuthi lapho odokotela bephatha iziguli zabo ngengxube ye isipuni uju nesigamu-isipuni se-sinamoni powder ngaphambi kokudla kwasekuseni. Kwasemini, phakathi nesonto, cishe i-73 kubantu abangu-200 baphathwa baphuthunyiswe ngokuphelele, kanti ngenyanga, cishe zonke iziguli ezingakwazi ukuhamba noma ukuhamba ngenxa ye-arthritis zaqala ukuhamba ngaphandle kobuhlungu.
Hlanganisa izipuni ezimbili zobisi nezinyosi ezintathu zesinamoni powder mayelana ne-400-500 ml yetiyi.
Lesi potion, esinikezwe isiguli esinamazinga aphezulu we-cholesterol, sinciphisa izinga laleli egazini le-10% emahoreni amabili. Njengoba sekukhulunywe ngeziguli ze-arthritis, uma uzithatha kathathu ngosuku, bonke labo abaphethwe yi-cholesterol engapheli bayokwelashwa. Ubusi obuhlanzekile obuthathwa nsuku zonke nokudla kunciphisa i-cholesterol.
Ucwaningo lwamuva luveze ukuthi uju ushukela luwusizo ngaphezu kokulimaza ubukhulu bomzimba. Abadala, abathatha uju nesinamoni powder ngokulinganayo, baqaphile futhi beguquguquke kakhulu. UDkt. Milton, owenza lo cwaningo, wathi ukuthatha isigamu sesipuni soju nsuku zonke egumbini lamanzi elifafazwa ngesinamoni, ngemuva kokuxubha futhi ntambama cishe nge-15h00 (uma ubukhulu bomzimba buqala ukwehla), sivuselela umzimba ngesonto elilodwa.
Ngokwezifundo zaseNdiya naseJapane, kuthiwa uma uju uthathwa nge-sinamoni powder, isisu sikhululiwe
Imfudu kanye nokubandayo
Ukushisa okuvamile noma okunzima kungaphathwa ngokuthatha isipuni soju olufudumele nsuku zonke no-¼ wezipuni ezinamakhemikhali ama-sinnoni izinsuku ezintathu. Lokhu kusiza ukwelapha iningi lokukhwehlela okungapheli, ama-flus, nama-sinuses okukhululwa.
Ufafaze i-sinamoni powder ngezipuni ezimbili zobisi, bese uwadla ngaphambi kokuya etafuleni, ukhulula u-asidi futhi uhlinzekwe ukugaya ukudla okunzima kakhulu.
Beka amabili wezipuni we-sinamoni powder kanye ne-isipuni soju ujuji lwamanzi afudumele nesiphuzo. Lokhu kubhubhisa amagciwane esithombeni.
Itiyi equkethe uju nesinamoni powder, ethathwe njalo, inciphisa umonakalo wokuguga. Thatha izinkezo ezine zeju, i-spoonful ye-sinamoni powder nezinkomishi ezintathu zamanzi; ubilise njengetiye.
Phuza ¼ indebe kathathu izikhathi ezine ngosuku. Lokhu kugcina isikhumba sishintsha futhi sishaya futhi sinciphisa ukuguga; Isikhathi sokuphila siyakhula futhi ubukhulu bomuntu omdala buqiniswa.
Uju nesinamoni mask ngokumelene induna
Hlanganisa uju wezipuni we-1 (uju lomtholo uma kungenzeka) nge-1,5 isipuni sinamoni powder. Le ngxube kufanele ihlale ngezinyanga ze-2.
Geza ubuso nomuntu ohlanza isikhumba, bese uyomisa.
Bese ubeka ingqimba encane yomxube we-honey-sinamoni ebusweni ngendlela efana ne-mask ubuso.
Yigcine cishe emaminithi angu-15, bese ugeza. Ukwenziwa kathathu ngeviki futhi induna ilahleka kancane kancane. Ncishisa imvamisa ukuba kabili ngeviki kanye nama-acne ancipha, bese kanye ngesonto. Lo ugogo uyasilungisa ezinyangeni ezine ngokunciphisa kakhulu induna yakho.
Thatha ukudla kwasekuseni okuvamile uju nesinamoni powder ngesinkwa, kunokuba i-jelly noma i-jam: itinciphisa i-cholesterol futhi ivikela inhliziyo. Uma labo abavele benenkinga ukwenza lokhu nsuku zonke, bazohlala kude kude nokunye ukuhlaselwa. Ukusetshenziswa njalo kwalokhu kunamathisela kunciphisa ukulahlekelwa umoya futhi kuqinisa ukushaya kwenhliziyo. EMelika naseCanada, amakhaya amaningi asebekhulile aphulukise iziguli ngempumelelo; baye bathola ukuthi imishanguzo kanye nemithanjeni ilahlekelwa ukuguquguquka kwayo futhi iguqulwe ukuguga: uju nesinamoni zivuselela.
Faka i-honey kanye ne-sinamoni powder isicelo esifanayo ezindaweni ezithintekile. Usiza ukuphulukisa i-eczema, i-ringworm nazo zonke izinhlobo zezifo zesikhumba.
Yenza umquba we-isipuni esisodwa se-sinin powder nezipuni ezinhlanu zobusi futhi usebenzise izinyo ezibuhlungu, ngesilinganiso izikhathi ezintathu ngosuku kuze kube yilapho ubuhlungu buyeka.
Abantu baseNingizimu Melika, bavuka ekuseni, bafaka isipuni sejuju nesinamoni emanzini ashisayo, ukuze umoya wabo uhlale ususha usuku lonke.
Uju oluthathwa nge-sinamoni i-powder relieves futhi lusiza ukuphulukisa izifo zesisu nezilonda.
Ukulahlekelwa izinwele - ukujula
Yenza unamathisele nge:
- isipuni se-1 soju
- isipuni se-1 se-sinamoni powder
- amafutha omnqumo ashisayo
Faka isicelo esikhwameni ngaphambi kokugeza, ulinde i-15 mn ugeze izinwele.
Kuye kwafakazelwa ukuthi iphumelele ngemuva kweminye i-5 min.
Nsuku zonke, esiswini esingenalutho, ekuseni, isigamu sehora ngaphambi kokudla kwasekuseni nakusihlwa, ngaphambi kokulala, uphuze itiye elilandelayo:
I-1 isipuni uju + i-1 isipuni sinamoni esitsheni samanzi abilayo.
Umthelela oqinisekisiwe wale tea itinamoni okuzovimbela amafutha ukuthi angagcini.
Ukusetshenziswa kwansuku zonke uju nesinamoni kuqinisa amasosha omzimba futhi kuvikela umzimba ngokuqinisa amangqamuzana amhlophe egazi ukulwa namagciwane kanye nezifo ezibangelwa amagciwane. Ososayensi bathole ukuthi uju unamavithamini ahlukahlukene kanye nensimbi ngobuningi.
Ungadluli izinkinobho ze-3 ngosuku.
Ungasebenzisi i-sinamoni ezinganeni ezingaphansi kwe-2.
Abesifazane abakhulelwe nabaqedayo kufanele bangadli ama-herbal teas noma ama-cinnamon.
Ungasebenzisi i-sinamoni amafutha abalulekile ngaphandle kokuthi iqondiswe ngumchwepheshe wezempilo.
• Impilo yami yemvelo: www.masantenaturelle.com
• Ipasipoti yezempilo: www.passeportsante.net
• I-Vulgaris Medical: www.vulgaris-medical.com
• i-Wikipedia: fr.wikipedia.org
I-Energy Therapist, i-Seeon (Isère) eFrance
i-imeyili: I-jean-paul @ thouny
Usuke usabela "Ubuhle be-sinamoni nobusi" Imizuzwana embalwa edlule